Momba anay - Yantai Jiajia Instrument Co., Ltd.
Yantai Jiajia Instrument Co., Ltd fikarohana mitohy ary mamolavola teknolojia vaovao amin'ny indostrian'ny lanjany. Miorina amin'ny teknolojia vaovao, tsara kokoa sy marina kokoa, i Jiajia dia manandrana mamorona ekipa mahay indrindra sy matihanina, hamokarana vokatra milanja milamina kokoa, maitso, matihanina ary marina. Tanjona ho marika mpamatsy ny vokatra mavesatra.
Miaraka amin'ny kolontsain'ny orinasa "Ny antsipiriany dia mitondra fahasamihafana. Ny toe-tsaina no manapaka ny zava-drehetra. ” , Jiajia dia nanohy nanenjika ny kilema aotra amin'ny kalitaon'ny vokatra, ny halaviran'ny aotra amin'ny serivisy, ny tarainan'ny mpanjifa aotra ho tanjona.
Fanaraha-maso henjana ny fizotry ny famokarana sy ny vokatra lavorary, Jiajia dia hanolotra serivisy tsara sy tsy mivadika, fifandraisana marina ary hiezaka ny ho naman'ny mpanjifa rehetra. Amin'ny fihetsika matotra sy lavorary, Jiajia no ho maodely amin'ny indostrian'ny fandanjana.
Jiajia dia manam-pahaizana manokana amin'ny R&D, famokarana sy marketing amin'ny vokatra milanja misy ny mizana amin'ny kamio, ny lanjan'ny fitsapana, ny rafitra fanaraha-maso.
Ny mizana indostrialy rehetra amin'ny habe sy endrika rehetra, rindrambaiko mifehy sy manara-maso ny fizotry ny famokarana dia hita eto. Manampy amin'ny fanatsarana ny vokatra sy ny kalitao amin'ny karazana vahaolana isan-karazany toy ny famolavolana, fanisana ary fampiharana hafa.
Ny vokatray dia mety ho hita amin'ny karazana indostria toy ny fonosana, ny logistika, ny toeram-pitrandrahana, ny seranan-tsambo, ny famokarana, ny laboratoara, ny fivarotana lehibe sns.
Miaraka amin'ny efa ho 20 taona niainany ny famokarana sy ny injeniera teknika matihanina, JIAJIA dia afaka mamaly ny filan'ny mpanjifa isan-karazany amin'ny vokatra mahazatra sy ny vokatra namboarina.
Manakaiky ny 20 taona niainan'ny raharaham-barotra avy any ivelany, mahazatra ny fomba fanafarana sy fanondranana ary ny fepetra takiana, dia afaka manome anao torohevitra sy hevitra matihanina.
Ekipa mpivarotra matihanina amin'ny fiteny 8 samy hafa dia afaka mifandray amin'ny mpanjifa tsy misy sakana. Mety kokoa, haingana ary marina kokoa ny fahatakarana ny filan'ny mpanjifa.
Calibration Mass, Ny lanjan'ny fikajiana ho an'ny mizana nomerika, Ny lanjan'ny fikajiana ny refy, Shear Beam Load Cell, Calibration lanjan'ny napetraka, Lanja voamarina,